पार्टीभित्रैबाट धोका हुँदा कांग्रेस पराजित भयो : सभापति देउवा - Machhapuchhre FM
​‘रिफ्रेस’ का लागि प्रचण्ड परिवारसहित सुकुटेमा
Do the Commonwealth Games haveafuture?
पार्टीभित्रैबाट धोका हुँदा कांग्रेस पराजित भयो : सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको अन्तरघातलाई चिर्न नसके पार्टी कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन् । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालले आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सभापति देउवाले अहिलेकै अवस्थामा पार्टीले गति लिन नसक्ने बताए ।
निर्वाचनमा पार्टीले भोग्नु परेको पराजयको गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको भन्दै सभापति देउवाले निर्वाचनको बेला पार्टीभित्रैबाट धोका हुँदा हार व्यहोर्न परेको जिकिर गरे । उनले पार्टीभित्र अन्तरघात गर्नेहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।
बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सिद्वान्तमा कांग्रेस विजयी हुने तर निर्वाचनमा पराजय हुनुले पार्टीभित्रको मूल नेतृत्व फितलो छ भन्ने प्रमाणित गरेको जिकिर गरे । उनले बिपीको पालाको जस्तै कांग्र्रेस बनाउन पार्टीभित्रको गुट–उपगुटको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा महामन्त्री डा. शंसाक कोइरालाले पार्टी भित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई अन्त्य गरेमात्र काँग्रेस बलियो बन्ने बताए ।
The post पार्टीभित्रैबाट धोका हुँदा कांग्रेस पराजित भयो : सभापति देउवा appeared first on News Portal of Global Nepali.